pamusoro 5 Waini Cities In Europe Zvino sei Get There | Save A Train
musha > Travel Europe > pamusoro 5 Waini Cities In Europe Zvino sei Get There
Ose waini wechokwadi anoda anoziva kuti maguta waini muEurope kupa kutengeka uye zvinoshamisa waini. From France kuItaly, uye zvakare, nyika idzi vanozivikanwa vakawanda kuti zvakanaka waini munyika.
Muchikamu, izvi nokuda yakanaka ekunze kukura mamiriro, asi zvakadaro unyanzvi. Havasi vose anoziva sei kuti Wekumusoro richinaka waini.
vanoda waini kuziva kuti dzimwe nzvimbo dziri zvishoma dzakaoma kusvika nechitima sezvo vari midzi mumaruwa. Zvinofadza, Western Europe ane maguta akawanda anogona kupa Uchiri akanakisisa waini muEurope. Plus, hamungambovi kuti dambudziko uri kuwana nzira kuti kwavari, sezvo zvose izvi svikika nechitima. Kana pokutangira ndiye mumwe mikuru nyika muEurope, uchawana nguva nyore kuwana ikoko.
With zvose izvozvo mupfungwa, ngatitorei Kutarira pakupedzisira mazita dzakanakisisa maguta waini muEurope uye sei kuti tivashanyire nechitima.
Zvinosuruvarisa ndisingazikamwi vose, Rhine River Valley muGermany uzere unhu yemizambiringa. Ivo pave yakanakisisa waini yose Germany, uye vazhinji vavo kusvika Koblenz.
taundi duku iri riri rwizi Rhine uye inopa mamwe akanakisisa mbariro waini uye maresitorendi munzvimbo. Zvinonyanya yakanaka, haana kufanana nemamwe maguta yakakura munharaunda.
Yemizambiringa nharaunda dziri wakakurumbira nokuti munyika yakanaka Riesling waini. Kana ukasarudza uchida kushanyira yevedza taundi Koblenz, uchava kuedza girazi kana maviri chando waini chena.
Kusvika Koblenz rakanyatsojeka nyore, sezvo ane imwe yakanakisisa nzvimbo ose Rhine Valley maguta waini. Zviri pakati pakati pemaguta maviri makuru German - Cologne uye Frankfurt, uye Kutsanya nezvitima vari kuenda Koblenz kubva. Chii chimwe, guta riri vachiuya Rhine Valley yevedza chitima nzira.
Pakupedzisira, guta achiri pedyo miganhu Netherlands, Bherujiyamu, Luxembourg, uye France. Izvi zvinoreva hamuna dambudziko uchiwana chitima kubva kunyika idzi pamwe.
Berlin kuna Koblenz Zvitima
MuFrankfurt kuna Koblenz Zvitima
Luxembourg kuna Koblenz Zvitima
Stuttgart kuna Koblenz Zvitima
Vienna haasi pakati pamaguta napo kurarama; zviri pakati yakanakisisa maguta waini Europe. The nyika inobereka yakawanda waini zvavo, akawanda iri kubva yemizambiringa pedyo Danube mumupata. Vienna pacharo rimwe shoma nyika yemisoro unobereka waini mukati meguta.
Zvose izvi zvinoreva kuti iwe uchava mukana kuedza zvakanakisisa waini nyika ine kupa, chaipo Vienna. Uyezve, unofanira kuziva kuti dende rewaini vanakidzwe iri Weissburgunder.
Vienna ndiro guta guru Ositiriya uye rimwe remaguta makuru muEurope, zvichireva iwe unenge kukurumidza kuwana ikoko nechitima. Ndiyo huru njanji nomusimboti ine kubatana kuti nyika dzakavakidzana dzinoverengeka.
Sarudza yedu pachena kuti Top 5 maguta waini Europe ndiro Bordeaux, Furanzi
Vaya Wakamboverenga waini, ziva kuti Bordeaux muFrance chimwe chezvinhu anozivikanwa misoro waini wenyika. Ndicho chikonzero chiri pandandanda yakanakisisa maguta waini Europe. Zvose waini kwakaitwa ichi yakakurumbira munharaunda runoyerera muguta kuti kunakidzwa.
Bordeaux waini vari yakakurumbira yavo chicherwa uye muchero manotsi, kubva cake zvibereko zvinotapirawo inezvibereko zvezhizha. waini izvi ndine zvinoshamisa kukwanisa Zera zvakanaka. The Vagadziri kazhinji kuvasiya kuti zera kwemakumi emakore.
zvinotarisirwa, haufaniri kuedza akwegura waini kuti arasikirwe mhanza kuona nharaunda yepamwoyo waini. Kune zvakawanda inokwanisika waini pamwe rakasiyana mutengo-ukoshi reshiyo. The pamusoro waini unofanira kuedza pano Red Bordeaux.
Kutaura guta haringavi dambudziko, pasinei uri riri Western Europe. Chii chimwe, dzakawanda chitima mitsetse kuenda Bordeaux kupfupiro soro-nokukurumidza nezvitima. Uchava chete vanoda maawa mashomanana kusvika guta kubva zvapo France. The chitima kubva Paris inosvika Bordeaux mu isingasviki 3 maawa!
Toulouse kuna Bordeaux Zvitima
Florence, Italy ndiyo yedu yokupedzisira Wine Cities mu Europe
The rine Tuscany, kana kwete yose Italy, Florence ndiro guta wakakwana nezvakanakisisa waini munyika. Pane misha inoverengeka vakakomba guta kuti pave inoshamisa waini Sangiovese uye vose vanokodzera kuva pandandanda maguta waini Europe. Izvi Vakamupfekedza misha uye zvinoshamisa Italian mukati vakaoma kusvika, asi guta Florence haisi.
Unogona kusvika guta nechitima kubva zvapo Italy, kana zvimwe, se Siwizarendi uye France. Kune dzose, soro-nokukurumidza nezvitima kuti aende kakawanda zuva nezuva kubva Milan uye Roma, asiwo kubva Venice. Nzendo idzi kutora maawa asingasviki maviri, uye iwe unowana mukana wekuona iyo makomo akanaka neminda yeItari.
Saka wagadzirira kuwana maguta waini Europe? SaveATrain.com zvichakubatsira kuwana guta ripi mu Europe, kutsanya, chipa, uye achinyemwerera!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#bestwine europeantravel europetravel Tranride nezvitima traintip Train Travel chitima kufamba Mazano travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly waini